माधव समूहको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा के के हुन्छ? - Dainik Online Dainik Online
माधव समूहको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा के के हुन्छ?
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले काठमाण्डौमा जारी राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाबाट आगामी ३ महिनाको कार्यभार बनाउने भएको छ।
ललितपुरको एक होटलमा जारी वृहत राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले वर्तमान राजनीतिक अवस्थामा पार्टीलाई एकतावद्ध गर्दे स्वेच्छारी शक्तिको विरुद्ध लड्ने रणनीति तय गर्न लागेको हो।
मंगलबार सुरु भेलामा आज पहिलो दिन सहभागीलाई विभिन्न १० वटा समूहमा विभाजन गरेर समूहगत छलफल गरिने छ । १० वटै समुहमा उठेका सुझावलाई एकीकृत गरि भोलीको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका रहेको छ।
बैठकले प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी ३ महिनाका लागि कार्यभार बनाउने र त्यसलाई सभाले पािरत गर्ने नेता गंगालाल तुलाधरले जानकारी दिए।
मुलभूत रुपाम वर्तमान परिवेशमा पार्टी एकता कायम गरि नेतृत्वको स्वेच्छाचारी कदम विरुद्धका अन्तरसंघर्षहरुलाई रणनैतिक रुपमा कार्यभारमा समावेश गरिने पनि उनले बताए।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा एमालेलाई पुनः सक्रियताका साथ अगाडि बढाउने जिम्मेवारी काँधमा आएका बेला पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका क्रियाकलापहरुले पार्टी एकता भाँडिने संकेत देखिएकाले आफुहरु कार्यकर्ता भेला गरि उनीहरुको सुझावका आधारमा पार्टी एकताको पक्षमा अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेको उनले उल्लेख गरे।
उनले भने “एकपक्षीय ढंगले स्वेच्छाचारी, दम्भ र घमण्डी स्वभावलाई देखाउदै पार्टी अध्यक्ष केपी ओली ले जुन प्रकारका हर्कतहरु देखाउन थाल्नुभयो, त्यसले पार्टी एकता भाँडिने संकेत देख्यौ। पछिल्लो श्रृंखला भनेको २८ गते केन्द्रीय पदाधिकारीहरुको जिम्मेबारी खोस्ने, एकपक्षीय रुपबाट पदाधिकारी सदस्य थपेको घोषणा गर्ने र कयौलाई पार्टी जिम्मेबारीबाट हटाउने र कारवाही गर्ने भन्ने स्थिति आएपछि हामी यो निष्कर्षमा पुग्यौ कि पार्टी जोगाउने हो भने स्वेच्छाचारी कदमको विरोधमा उत्रनु पर्दछ। यो पार्टीलाई एकतावद्ध गरेर लैजाने हो भने हैकमवादी प्रवृत्तिबाट पार्टीलाई जोगाउनुपर्छ । त्यस्तो खालको कुरा महसुस भईसकेपछि हामी यो ठाउँमा आईपुगेका हौ।”
उनले एकताका साथ अघि बढ्नका लागि भेलाले उर्जा दिने विश्वास आफुहरुले लिएको बताए।
उनले भेलामा भएको कार्यकर्ताको उपस्थितिले पार्टी अध्यक्ष ओलीको कामकारवाहीहरु कुनैपनि हालतमा सर्वस्वीकार्य छैन र विरोध योग्य छ भन्ने संदेश पनि देशव्यापी रुपमा प्रवाहित गरेको दाबी गरे।
पार्टी अध्यक्षले गुटगत भेलामा सहभागी भए कारवाही गर्ने बताईरहेका बेला पार्टी एकताका लागि जुनसुकै परिणाम भोग्ने मानसिकतामा नेताकार्यकर्ताहरु भेलामा सहभागी भएको पनि उनले बताए।
उनले भने “उहाँले कति कारवाही गरेर जानुहुन्छ, त्यो पनि हामी हेर्नेवाला छौ । हामी उहाँदलाई भन्न चाहन्छौ तपाई कारवाही गरेर देखाउनुहोस्। आज देखि हामी कारवाहीका लागि लामवद्ध हुदैछौ २५ सय कार्यकर्ताहरु यहाँ लामवद्ध भएर। केपी ओली कमरेडलाई हामी भन्न चाहन्छौ तपाई कारवाही गरेर देखाउनुहोस्। कारवाही गर्दे जाने हो भने त उहाँ पनि बाँकी रहनुहुन्न नि त। उहाँ भोली गएर एैया पनि भन्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नुहुन्छ।”
उनले वृहतर बामपन्थी एकताबाट च्युत हुनुहुदैन भन्ने मानसिकताले आफुहरु अगाडि बढ्दै गरेको अवस्थामा अध्यक्ष ओलीबाट एमाले पनि एकताबद्ध भएर अघि बढ्न नसक्ने परिस्थिति श्रृजना हुनु दुखद भएको प्रतिक्रिया दिए।
विभाजित हुन नपरोस भन्ने मनोविज्ञान कार्यकर्तामा देखिएको भएपनि नेतृत्वले विभेदपुर्ण व्यवहार गरेकाले समस्या भएको भन्दै उनले कुनैै पनि कार्यकर्ता नेतृत्ववाट अपमानित भएर बस्न नसक्ने बताए।